सेयर बजार किन घटबढ हुन्छ ? « Mero LifeStyle
सेयर बजार किन घटबढ हुन्छ ?
सरिता थारू	|| 30 June, 2021
सेयर बजारमा भएको हलचलले निकै चर्चा पाउँछ । आखिर सेयर बजारमा यस्तो घटबढ किन हुन्छ ? यसको एकै खालको जवाफ पाउन गाह्रो छ । ठूला लगानीकर्ता तथा विश्लेषकका आ–आफ्नै धारणा हुन्छन् । माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार मूल्य निर्धारण भए जस्तै सेयर बजारमा पनि माग र आपूर्ति नियम अनुसार घटबढ हुने यसका जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले सेयर बजारलाई घाटा र नाफाको बजार पनि भनिन्छ । कम्पनीले नाफा कमायो भने लगानीकर्ताले पनि कमाउँछन् र लगानी गरेको कम्पनी घाटामा जाँदा लगानीकर्ता पनि घाटामा जान्छन् ।
किन घटिरहेको सेयर बजार ?
केही सातायता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) दैनिक रुपमा घटेको छ । यस्तो हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छ तर, सेयर बजार एउटा उचाइमा पुगेपछि प्रोफिट बुकिङ्ग हुन्छ । जसमा छोटो समय लगानीकर्ताले प्रोफिट बुकिङ्ग गर्छन् । यो प्रोफिटको लागि सेलरहरु धेरै आउँछन् । जसले बजारमा तलमाथि हुन स्वभाविक रहेको सेयर बजार आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषक एनबी थापा बताउँछन् । यसरी सेयर बजार घटेमा ‘डिमण्ट एण्ड सप्लाई’को सिद्धान्त लागू हुन्छ । जसमा विक्रेताहरु बढेमा मूल्य घट्छ । ‘सेयर बजार लामो समयदेखि तलमाथि भइरहेको छ । अपट्रेण्डको मार्केट तीन हजारको लेबल मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध रहेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सेयर मार्केट घट्छ।’
लकडाउनपछि ब्रोकरको कारोबार अनलाइन स्टिममा आएकाले पनि सेयर बजार बढेको मानिन्छ । यससँगै साधारण आइपिओ भर्नेको संख्या ३० देखि ३५ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ ।
सेयर बजारलाई कतिपय बाहिरी तत्वले पनि असर गरिरहेको हुन्छ । बैंकिङ कारोबारमा आएको समाचारले पनि सेयर बजारमा असर पारेको देखिन्छ । जस्तै, राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्स सेयरहरु होल्डिङ र ट्रेडिङ्ग गर्न नपाउने समाचार आए पछि बैंकिङ क्षेत्रलाई हिट गर्यो र यसको असर नेप्सेमा देखिएको थापा बताउँछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन) ले पनि ५१ वटा कम्पनी योग्य छैन भन्दै निकालेको सूचनाले पनि हालको सेयर बजार सुस्ताएको उनको भनाई छ ।
कसरी बढ्छ सेयर ?
सेयर बजारमा बियरि र बुलिस ट्रेण्ड हुन्छ । नेपालको प्रत्येक ८ वर्षको साइकल हेर्ने हो भने चार–पाँच वर्ष बियरिस ट्रेण्ड चलेको थियो । अर्थात् बजार घटेको थियो । एक–दुई वर्षयता बुलिस ट्रेण्ड सुरु भएको छ । कोरोना महामारीमा भएको लकडाउनपछि सेयर बजार बढेको विश्लेषक थापा बताउँछन् । ‘लकडाउनको समयमा मान्छेले अन्य ठाउँमा लगानी गर्ने अवसर नभएपछि सेयर बजार लगानीको विकल्प बन्न पुग्यो र सेयर बजार बढ्यो,’ उनले भने ।
लकडाउनपछि ब्रोकरको कारोबार अनलाइन स्टिममा आएकाले पनि सेयर बजार बढेको मानिन्छ । यससँसँगै साधारण आइपिओ भर्नेको संख्या ३० देखि ३५ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । थापा भन्छन्, ‘आइपिओ पर्नेहरुले सेकेण्डरी मार्केटमा आएर नै कारोबार गर्छन्, जसले सेयर मार्केट बढाउन मद्दत गर्छ ।’
गाउँदेखि सहरसम्म आइपीओकै चर्चा « Mero LifeStyle
[…] लिनु पर्ने हुन्छ ।यो पनि पढ्नुहोस्सेयर बजार किन घटबढ हुन्छ ?नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने सोचमा […]